Ady amin’ny coronavirus : Tokony ho mailo hatrany ireo olona mifanerasera amin’ny olona – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:02
Ny Dr Fidy Bariniaina nitondra ny fanazavana.
Accueil/Songadim-baovao/Ady amin’ny coronavirus : Tokony ho mailo hatrany ireo olona mifanerasera amin’ny olona
Ady amin’ny coronavirus : Tokony ho mailo hatrany ireo olona mifanerasera amin’ny olona
Manoloana ny fihanahan’ny valanaretina covid-19, nambaran’ny Dr Fidy Bariniaina omaly, tetsy Anjanahary fa tokony ho mailo hatrany ireo olona mivoaka ny trano, indrindra ireo olona mifanerasera amin’ny olona betsaka…
Rado Harivelo il y a 2 semaines
Ny Dokotera Fidy Bariniaina nitondra ny fanazavana.
Nasongadin’ny Dr Fidy Bariniaina, omaly tetsy Anjanahary « fa tokony ho mailo hatrany ireo olona mivoaka ny trano, indrindra ireo olona mifanerasera amin’ny olona betsaka. Tafiditra ao ireo mpivarotra, mpiasan’ny banky, mpiasan’ny fitaterana, ireo olona mitoetra amin’ny toerana somary mihiboka… ». Noho izany, tokony hanaja hatrany ny elanelana iray metatra sy ny fepetra sakana, mihoatra araka izay azo atao. Raha azo atao, ilaina hatrany ny manao vaksiny satria mampitombo ny hery fiarovana. Ilaina koa ny famonjena dokotera, raha vao misy trangana tsy fahasalamana. Satria ny fisehon’ny gripa, dia kohaka madinidinika, tazo, marary an-doha, mety marary tenda, malain-komana, mitovy tanteraka amin’izay ihany ny fisehon’ny coronavirus, fa miampy tsy maheno fofona, tsy maheno tsiron-kanina, sempotra. Navoitrany fa iray tarika ao daholo, ny tazo, ny gripa, ny coronavirus, izay matetika tonga dia tsaboin’ny dokotera avokoa. Noho izany, tsy tokony hanao dokotera tena, fa vantany vao misy tranga, dia manatona mpitsabo avy hatrany.
Raha ny vinavina momba ny resaka coronavirus, tsy voatery mitombina hatrany isaky ny Firenena. Nambaran’ny Dokotera Fidy Bariniaina, hatrany fa ireny fety teo ireny, no nampitangorona olona marobe iny, no tena antony nampiparitaka be ny valanaretina covid-19. Rehefa afaka iny fety iny, azo inoana fa hihena io, ary azo antoka fa tsy hisy izany fihibohana sy fanidina ny faritra izany, izay tena misy fiantraikany be amin’ny ara-toekarena, tsy ny eto an-toerana ihany fa maneran-tany mihitsy. Araka ny fantatra, ny lalàna ny tolotra sy ny tinady no mifehy ny vidin’entana manerantany. Tahaka izany koa, rehefa misy ny fihibohana, tamin’ny alalan’ny « Hamehana ara-pahasalamana », mihena ny famokarana amin’ny ankapobeny, dia mihena ny vokatra, kanefa ny tinady marobe. Vokany, miakatra hoazy ny vidim-piainana manerantany. Inoana koa fa efa tokony hoavy ny Pic.
FILOHA ANDRY RAJOELINA: “Tsy hanao politika intsony aho raha tsy vita ny RN13”
Ivon-toeram-panofanana Soa Mahamanina : Hanampy ireo tanora amin’ny firosoana ny sehatry ny asa
TANORA SY NY FANATANJAHANTENA Manatanteraka ny velirano ho fanohanana ireo tanora ny faritra Bongolava
CFIM – ZANDARIMARIA : Hifampizara traikefa amin’ny fiarovana an-dranomasina
FAHAMAIZANA TAO ANKARAFANTSIKA: Dimy andro taty aoriana vao maty ny afo